Home » Akụkọ Njem njem Hawaii » Uzo esi aga uzo uzo COVID-19 rutere na Honolulu na Maui
Uzo esi aga uzo uzo COVID-19 rutere na Honolulu na Maui
Usọ osimiri na ụlọ nkwari akụ nke Hawaii na-adịwanye ndụ ọzọ, n'ezie site na ịhapụrụ mmekọrịta mmadụ na mkpuchi chọrọ. Otu ihe kpatara ya bụ nhọrọ ọhụrụ maka ndị njem ụgbọelu na-abata gafere ogologo ahịrị iji kpochapụ nyocha na ajụjụ COVID-19. United Airlines, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines na Southwest Airlines bụ akụkụ nke atụmatụ a.
Ndị njem ụgbọelu na-abata na Honolulu ma ọ bụ Maui nwere ụzọ isi gafee uzo COVID-19 na-enyocha nyocha na ịjụ ajụjụ mgbe ị na-efe ụfọdụ ụgbọ elu.
A na-enyekwa ndị njem njem Southwest Airlines ihe ụgbọelu United Airlines, ụgbọ elu Hawaiian, na Alaska Airlines nọbu ebe ahụ. Nke a bụ ịgafe ahịrị ndị toro ogologo na Honolulu na Maui mgbe ha natachara ọkwa tupu ha ahapụ mba US.
Southwest Airlines nwere “ikekwe” na nkwenye ya ma nọrọ jụụ banyere ihe “eleghị anya” a nwere ike ịbụ.
O yiri ka ụgbọ elu United, Hawaiian Airlines, Alaska Airlines, na Southwest ụgbọ elu nwere ike ịbụ ụgbọ elu kachasị mma iji gbaga ndị ọbịa na Hawaii, n'ihi ya, ha nwere ike ịnweta isi na ezumike ha Hawaii na ịbịaru Waikiki Beach, Wailea, ma ọ bụ Kaanapali osimiri.
Dabere na nkwupụta mgbasa ozi nke Southwest Airlines natara, ụgbọ elu ahụ na-emezi ka ọ dịrị ndị njem ya mfe karị ịbanye na hotels nke Hawaii.
Ihe Southwest Airlines anaghị agwa na mwepụta ya bụ na ndị ọrụ njem ụgbọ elu dị ugbu a dịịrị ndị ọrụ a, dịka United Airlines, Alaska AIrlines, na Hawaiian Airlines.
Southwest Airlines na-eso ụgbọ elu ndị ọzọ ma na-enye ndị njem ohere igosipụta ihe akaebe nke nrube isi ha na Hawaii Nchekwa Njem mmemme tupu ha ahapụ US mainland.
Ndị ahịa ndị tinyegoro ihe nyocha nke COVID-19 nke akwadoro nke achọrọ maka ozi njem ma mechaa ajụjụ ajụjụ ahụike tupu ịhapụ ala mmiri nwere ike tozuo oke nyocha ọdụ ụgbọ elu mgbe ha rutere Honolulu (Oahu) na Kahului (Maui)
Isiokwu bụ “ma eleghị anya” - ọ bụ nkwenye nke Southwest Airlines kwuru. eTurboNews gbalịrị ịnweta nkwenye na "enwere ike," mana Southwest Airlines enweghị azịza ọ bụla.